भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ३ लाख ७० हजार संक्रमित, मृत्यु कति ? - bishwokhabar.com bishwokhabar.com
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ३ लाख ७० हजार संक्रमित, मृत्यु कति ?
काठमाडौँ। दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा थप ३ लाख ७० हजारमा संक्रमण भएको छ।दैनिक संक्रमण वृद्धिका आधारमा विश्वकै अतिप्रभावित मुलुक भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख ७० हजार ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसअघि भारतमा पहिलो पटक गत शनिबार ९१८ वैशाखमा० कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि ४ लाख नाघेकोमा आज त्यो संख्या केही घटेको छ ।
पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या १ करोड ९९ लाख १९ हजार ७१५ पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा १ करोड ६२ लाख ८१ हजार ७३८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । अब भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ लाख १९ हजार ३२ छ ।
यस्तै त्यहाँ एकैदिन ३४ सय २२ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै जाँदा भारतमा मृतक संख्या पनि दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा मृतक संख्या २ लाख १८ हजार ९४५ पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोना दिनहुँ बढ्न थाले पछि एनआरएनएले बोलायो आकस्मिक बैठक